I-Photocall TV, inketho ethokozisayo yokubuka i-DTT noma kuphi | Kusuka kuLinux
UJoaquin Garcia Cobo | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngemuva kwenkinga ye-COVID-19, ukusetshenziswa nokusetshenziswa kokuzijabulisa oku-inthanethi kukhule kakhulu. Ukwanda bekufana nokuthi izinkampani eziningi zalezi zinsizakalo bekufanele zikhulise izinsiza zamaseva wazo futhi zinciphise ikhwalithi yokudluliswa kokuqukethwe kwazo. Okubukeka njenge-anecdote elula manje sekuwumkhuba oqhubeka ukhula. Ukugqamisa izinsizakalo ezifana ne-Photocall TV noma iPluto TV, phakathi kokunye.
Ithelevishini eku-inthanethi ingumkhiqizo oyinkanyezi kwezokuzijabulisa kwidijithali, egqamisa izinsizakalo ze-movie ezisakazwayo, kepha akubona bodwa. Ezinyangeni ezedlule, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza zewebhu eziqukethe i- unikele nge-DTT neziteshi ezizimele online mahhala, ezimweni eziningi. Futhi yize abaningi benu bezothi kuyafana lokho iThelevishini yethu esinikeza khona, iqiniso ukuthi lezi zinsizakalo ziyasivumela buka okuqukethwe kunoma iyiphi idivayisi futhi kusisiza futhi ukwehlisa inani lezikhangiso ezifakiwe kokuqukethwe.
1 Yini i-Photocall TV?
2 Yiziphi iziteshi engingazibuka nge-Photocall TV?
2.2 Okwamanye amazwe
3 Isebenza kanjani i-Photocall TV
3.3 Ungazirekhoda kanjani izinhlelo
4 Ungayibona kanjani iPhotocall TV kuThelevishini yethu
4.3 Amabhokisi wethelevishini
4.5 Ezinye izindlela zamahhala ze-Photocall TV
4.6 I-Pluto TV
4.9 Izinhlelo zokusebenza ze-eFilm ne-TV
Yini i-Photocall TV?
Ezinyangeni ezedlule, kudaleke izinhlelo eziningi zokubuka i-DTT nezinye iziteshi mahhala, kodwa ngeshwa akuzona zonke lezi zinhlelo zokusebenza ezinempilo ende noma zisebenza kahle. Kodwa-ke, uhlelo lwe-Photocall TV lusebenza kahle, seluvele lunempilo eningi. I-Photocall TV iyisevisi yokusakaza yethelevishini ngokusemthethweni ngokuphelele futhi mahhala esakaza iziteshi ze-DTT ezivulekile.
I-Photocall TV ifake nochungechunge lwezinsizakalo ezidlula ukubukela ama-movie, uchungechunge noma izinhlelo ngezilimi ezahlukahlukene. Ngaphezu kokukwazi ukubuka i-DTT kumadivayisi ahlukene, i-Photocall TV iyasivumela lalela iziteshi zomsakazo ngokusakaza, Iziteshi ze-DTT international, Iziteshi ze-DTT ezikhethekile ezihlokweni ezahlukahlukene, eyodwa Umhlahlandlela we-TV ngezinhlelo nezinhlelo zawo kanye nokuhlanganiswa kwezinsizakalo ze-VPN ukuze ukwazi ukubuka ngaphakathi ezweni lesiteshi kanye nakwelinye izwe.
I-Photocall TV inenguqulo yewebhu nohlelo lokusebenza lwe-Android, okwamanje lolu hlelo lokusebenza alusasebenzi kepha inguqulo yewebhu isahambisana namadivayisi. Kusuka manje, insizakalo iyahambisana nezandiso ezahlukahlukene nezinsizakalo eziku-smartphone, ithebhulethi yethu, i-smart tv nesiphequluli sewebhu. Lokhu kusho ukuthi singayibuka kunoma iyiphi idivayisi ngaphandle kwezinkinga zokuhambisana nefomethi ethile noma umkhiqizo.
Yiziphi iziteshi engingazibuka nge-Photocall TV?
Njengamanje singakwazi bheka cishe zonke iziteshi ze-DTT eSpainLokhu kusho ukuthi singazibona iziteshi eziyinhloko ezifana neLa 1, La 2, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Mega, Neox, njll ... kanye neziteshi zethelevishini zesifunda, njengeTV3, Telemadrid, ETB noma Canal Sur, edlula Iziteshi ze-DTT zezinkampani zezindaba njenge-EuropaPress kanye / noma Iziteshi ze-DTT zamaqembu ebhola njengesiteshi seReal Madrid noma isiteshi seFC Barcelona.
Iziteshi zamazwe omhlaba esizothola kulesi sigaba yilezi iziteshi ezivela kwamanye amazwe ezisakaze nge-DTT noma ku-inthanethi futhi kulezi sizothola iziteshi zazo eziyinhloko noma iziteshi zezindaba. Isibonelo, sinesiteshi se-BBC e-United Kingdom, kepha asinazo iziteshi ze-BBC Two, BBC Three noma ze-BBC Four. Kuzokwenzeka okufanayo nangezinye iziteshi kwamanye amazwe. Ngeshwa, siyazibona lezi ziteshi ngezilimi zokuqala ezisakazwa ngazo, Ngeke sibe nemibhalo engezansi yesiNgisi noma ukuhunyushwa kwayo ngeSpanishi ngaphandle kokuthi iziteshi zomthombo zenze njalo.
Isigaba "Esinye" sakhiwe ngamashaneli wethelevishini ayinhloko. Lezi ziteshi zivele eminyakeni yamuva futhi kuze kube manje bezibekelwe izinsizakalo zocingo, kepha I-Photocall TV isivumela ukuthi sizibuke lezi ziteshi mahhala, yize kungebona bonke. Izindikimba zalezi ziteshi zehlukile, kusuka eziteshini ezinomlando kuya kuziteshi ezinezihloko zasekhaya, ngokusebenzisa iziteshi zasekhishini noma iziteshi ezinezihloko zezingane nezentsha. Ngaphezu kwalokho, iPhotocall TV ayigcini ngokuqoqa umzila wetimu ngayinye kodwa futhi iqoqa neziteshi ezidume kakhulu zalengqikimba noma zonke iziteshi ze-DTT zaleyo ngqikithi.
Sekuyiminyaka, iziteshi ezinkulu zomsakazo zisakaza izinhlelo zazo nge-inthanethi. Ngalo mqondo, iPhotocall TV ayisunguli, kepha singakucabanga lokho Isigaba se-Photocall TV siwuhlobo lwemibhalo yemisakazo esakaza online. Okuthile okuwusizo uma sithanda ukushintsha isiteshi somsakazo futhi sifuna ukukwenza ngokushesha.
Isebenza kanjani i-Photocall TV
Ukusebenza kwe-Photocall TV kulula, mhlawumbe kuyinto enhle lolu hlelo lokusebenza olunayo. Esigabeni ngasinye kunezimpawu ezinamalogo esiteshi ngasinye se-DTT. Chofoza kuso futhi uzosiqondisa ekusakazweni kwesiteshi. Izinga lokusakazwa lizohluka ngokuya ngesiteshi, kepha ngaphandle kwalapho sinokuxhumana okungekuhle, into ejwayelekile ukuthola izinhlelo ezisakazwa ngesinqumo 720 noma 1080. Uma sifuna ukubuyela ohlwini lwesiteshi, kuzofanele sicindezele inkinobho engemuva yesiphequluli sewebhu noma uhlelo lokusebenza bese nalokhu sizobuyela ohlwini lwesiteshi. Uma sifuna ukuphuma, kufanele sivale ithebhu yesiphequluli sewebhu.
Ukufakwa kwe-Photocall TV kulula kakhulu, kufanele sivule isiphequluli sewebhu bese siya kokulandelayo ikheli lewebhu. Ngeshwa uhlelo lwe-Android alusasebenzi ngakho-ke njengamanje ukuphela kwendlela yokufinyelela insiza ye-Photocall TV.
Ungazirekhoda kanjani izinhlelo
I-Photocall TV isebenza ngesiphequluli sewebhu futhi lokhu kusivumela ukuthi sibe neminye imisebenzi ezinye izinhlelo ezingeke zikwazi noma ezingenazo. Kulokhu singakwazi rekhoda izinhlelo ezisakazwa nge-Photocall TV sibonga i-plugin ye- I-Chrome ibizwa nge-Stream Recorder - landa i-HLS njenge-MP4. Le plugin ingeza inkinobho rekhoda kusiphequluli sewebhu. Siqala ukusakazwa kohlelo bese ngemuva kwalokho sicindezela inkinobho yokuqopha bese ukuqoshwa kohlelo olusakazwayo kuzoqala. Uma ifayela seliqediwe, lizogcinwa kumadokhumenti ethu noma endaweni esiyivezile ku- "Izilungiselelo" zesengezo.
Ungayibona kanjani iPhotocall TV kuThelevishini yethu
Yize i-Photocall TV iyi-web application, lokhu akusho ukuthi asikwazi ukuyisebenzisa kumadivayisi ahlukene. Okulandelayo siyakutshela singayisebenzisa kanjani i-Photocall TV kumadivayisi ahlukene ahlobene nethelevishini, ngaphandle kokubheka i-smartphone, ithebhulethi kanye ne-pc, esingayithola ngesiphequluli sewebhu njengoba sibonisile ngenhla.
Idivayisi ye-Google ye-TV isebenza kahle nge-Photocall TV, ukuyenza isebenze nje kufanele sisebenzise isiphequluli sewebhu futhi sibonise isibuko kudivayisi ye-Chromecast, okungukuthi, sithumela okuqukethwe kugajethi. Inkinga kuphela ngalokhu kusetshenziswa ukuthi kufanele siqiniseke ukuthi sisebenzisa iGoogle Chrome, iChromium noma okuphuma kukho. Le nqubo ayihambisani neMozilla FirefoxEmpeleni, ngakho-ke kufanele sishintshe isiphequluli esimweni esinjalo noma sikhethe ukusebenzisa isengezo esivumela ukuthi sibukise isibuko phakathi kwesiphequluli ne-chromecast. Uma singenayo ikhompyutha futhi sikwenza ngethebhulethi noma nge-smartphone, kufanele sithumele okuqukethwe ngale divayisi futhi maka i-chromecast njengendawo yokwamukela.
Uma sifuna ukudlala okuqukethwe kuthelevishini ye-Amazon, singakwenza ngezindlela ezimbili. Owokuqala usebenzisa igajethi efana ne-chromecast bese ngohlelo lokusebenza lokusakaza thumela okuqukethwe kwe-Photocall TV ku-Fire TV. Kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezisivumela ukuthi sibukise phakathi kwe-pc yethu, i-smartphone noma ithebhulethi ne-FireTV efana ne-Screen Mirroring noma i-SendtoScreen ye-Fire TV.
Kunamamodeli ahlukene noma amagajethi amabhokisi noma ama-minipcs axhuma kuthelevishini noma aqaphe futhi angasakaza izinhlelo zethelevishini noma amasevisi kanye / noma umculo. I-Photocall TV isekela bonke. Ngokuzijabulisa kwayo, njengoba kunjalo nge-Fire TV, singakwenza ngesiphequluli sewebhu. Iningi lalawa ma-minipcs ane-Android njengohlelo lokusebenza ngakho-ke noma sisebenzisa isiphequluli sewebhu noma singakwazi sebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-mirrorcasting njengasendabeni ye-Fire TV.
Idivayisi ye-Apple ekuqaleni ibingenalo uhlelo lokusebenza lwe-Photocall TV, kepha njengoba ingasebenzi njengamanje, amadivayisi we-Apple asezingeni elilinganayo namadivayisi we-Android, ngoba lokhu kufanele sisebenzise isiphequluli sewebhu ukudlala okuqukethwe. I- imodeli yakamuva yale gajethi ye-Apple ivumela ukuxhumana ne-iPhone yethu ngakho singadlala kusuka ku-smartphone bese sithumela ku-Apple TV noma singadlala kusuka ku-Apple TV bese sisebenzisa i-iPhone yethu njengesilawuli kude. Okuthandayo.
Ezinye izindlela zamahhala ze-Photocall TV
Njengoba sishilo ekuqaleni, ezokuzithokozisa kwi-inthanethi zikhuphukile ezinyangeni ezisanda kwedlula futhi lokho kwenze iPhotocall TV ingaphumeleli nje kuphela kepha futhi ezinye izinsizakalo ziphumelele ngokumangalisayo futhi zisetshenziswa izinkulungwane zabantu. Nazi ezinye izindlela ezikhona ongazisebenzisa esikhundleni se-Photocall TV:
Le sevisi ingenye yezintandokazi kakhulu ngoba inikela ngohlelo lokusebenza lwe-Android ne-Apple TV futhi, njenge-Photocall TV, iyinikeza mahhala. Kodwa-ke, inenkinga nge-Photocall TV futhi yilokho IPluto TV inikezela ngesiteshi esisodwa se-TV ngeziteshi ezingaphansi ezahlukahlukene, kodwa ayinikezi okuqukethwe emhlabeni wonke noma ukufinyelela kumsakazo. Iphuzu elihle ukuthi uma lihambisana ne-iOS namadivayisi ayo, inohlelo lokusebenza esingabuka ngalo okuqukethwe.
Isikhathi esithile manje, abasebenzisi be-Gnu / Linux babenenketho ethakazelisa kakhulu ekhule yaba yindlela yokuhlukile ye-Photocall TV kodwa futhi ancintisane neNetflix uqobo kunoma iyiphi ipulatifomu. Le sevisi ibizwa ngePlex.
I-Plex iyisevisi nesoftware efakwe kuseva yakho nokuthi kanye nezinzuzo zayo singakwazi thola i-netflix yangokwezifiso lokho kungasakaza iziteshi zomsakazo neze-DTT, konke ngasese futhi kwenziwe ngezifiso ngathi. Inkinga ngalolu hlelo ukuthi sizodinga ukuba neseva yangasese engaba yikhompyutha yethu noma i-minipc elula.
The kungenzeka bukela iziteshi ze-DTT online kuhlu lwe-IPTV. Lezi zinhlu zokudlalayo zifana nezinhla zokudlalayo zeSpotify Okubi ukuthi amaza athile futhi Amakheli esiteshi se-IP avame ukushintsha bese iziteshi ezingezwe kulezi zinhlu ziyeke ukusebenza. Iphuzu elihle ukuthi singazisebenzisa lezi zinhlu kunoma iyiphi idivayisi ngoba abadlali abaningi, bobabili be-Android ne-iOS, bayasebenzisana nabo. Ngisho nemibukiso edumile I-VLC y Ingabe unenketho yokudlala lezi zinhlu ze-TV.
Izinhlelo zokusebenza ze-eFilm ne-TV
Kukhona amathuba okwenza izinsizakalo ze-Photocall TV ngesandla, okungukuthi, siya kuwebhusayithi yesiteshi ngasinye se-TV futhi siyayibuka noma silanda uhlelo lokusebenza olusemthethweni futhi silibone ngeso lengqondo ngalo. Iphuzu elibi lalokhu ukuthi sizodinga ukufaka izinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwekhulu uma sifuna ukufana ne-Photocall TV, ngaphandle kokukhohlwa izinkinga zokuphepha esingaba nazo ngayo. Iphuzu elihle ukuthi sizobuka isiteshi ngekhwalithi ephezulu futhi ezikhathini eziningi sizokwazi ukubuka uhlelo noma yinini lapho sifuna khona. Inkonzo Yokufunda Komphakathi kaHulumeni waseSpain yethule izinyanga insiza yamahhala yokubolekwa kwe-movie ne-inthanethi. Isevisi ibizwa I-eFilm. Le sevisi ihlanganiswe eBiblio futhi isinikeza ikhathalogi ebanzi yamafilimu, amadokhumentari nochungechunge, kepha kufanele sikwazi ukufinyelela ku-eBiblio. Okuhle ngale nsizakalo ukuthi sinokuqukethwe okungenazikhangiso kunoma iyiphi idivayisi. Okubi ngayo ukuthi sizoyithola izinsuku eziyi-7 kuphela bese kufanele siyivuselele uma sifuna ukuyibona futhi. Ngaphezu kwalokho, lizinhlelo zokusebenza zeselula ngokuvamile azizinhle kakhulu noma ngabe zikhona zombili i-Android ne-iOS.
Sekuyisikhathi eside, ngisho nangaphambi kwenkinga ye-COVID19, bengisebenzisa amasevisi wethelevishini edijithali noma ithelevishini ngokusakazwa. Kubukeka njengokuthuthuka kimi futhi Ngikuthola kuwusizo kakhulu kunokusebenzisa iziteshi ze-TV, ngoba phakathi kwezinye izinto ugcina izikhangiso. Kepha ngaphezu kwalokho, lezi zinsizakalo zikuvumela ukuthi ukwazi ukufinyelela ezinhlelweni ongeke ukwazi ukufinyelela kuzo, njengeziteshi ezingumxholo noma iziteshi zomhlaba jikelele. Ngeshwa, kwabaningi lezi zinsizakalo zihlobene nezicelo ze-hacker noma izinhlelo zokusebenza ezingekho emthethweni futhi azikho futhi ezinye. Okungenani ku-Photocall TV nalokho engizamile. Engikuthandile kakhulu nge-Photocall TV ukuncipha kokuqukethwe kwayo ku- amakhasi ewebhu amathathu kuphela. Engathi isiqondisi se-TV nokuthi zonke zisebenza kahle, ngeke ubone noma iliphi iphutha lokuqukethwe okuyiphutha noma alikho, ngaphandle kokuthi iwebhu isebenza kabi ngoba inabasebenzisi abaningi kakhulu, okwenzeka kwesinye isikhathi.
Kukho konke lokhu ngincoma ukuthi usebenzise le sevisi, ngokungeziwe, manje ngesimo sezulu esihle namaholide, I-Photocall TV iyindlela enhle yokugwema ukulayishwa ngethelevishini, Sizodinga kuphela ithebhulethi noma i-smartphone uqobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Photocall TV, inketho ethokozisayo yokubuka i-DTT noma kuphi
UJUAN REYES GUERRERO kusho
Indatshana enhle kakhulu. Ngifisa sengathi bengikubonile lokhu phambilini, bengikuthanda… ikakhulukazi ngenkathi kuyindebe yaseMelika ukubukela le midlalo. Ngiyayithanda le webhusayithi.
Ukwanga okuvela eColombia
Phendula ku-JUAN REYES GUERRERO
Ngiyabonga kakhulu ngokusifunda. Ngiyajabula ukuthi ukuthole kuwusizo yize bengephuzile, kepha hheyi, iNdebe yeMelika ngeke ime, ungayisebenzisa ngokuzayo. Ngikufisela okuhle!!!
UJuan Reyes Guerrero wase-Elizondo kusho
Ngiyabonga ngokuphendula… Ngivakashela i-blog selokhu ngaqala ku-Ubuntu 14.04
Phendula uJuan Reyes Guerrero ovela ku-Elizondo
Imvamisa ngisebenzisa uhlelo oluletha i-linux mint distro engiyithandayo lubizwa ngeHypnotix, ngiyaluthanda lolu hlobo lokufundisa ngiyabonga kakhulu ngokukwenza, ngikushiyele ithiphu ngemivuzo enesibindi ngithemba ukuthi ikufinyelele ^ ^
Ukuba sengozini kwe-Coursera API kungavumela ukuvuza kwedatha yomsebenzisi